कुखुरा पहिलो कि अण्डा ? यस्तो छ क्वान्टम फिजिक्सको जवाफ
मुख्य पृष्ठरोचक रमाइलोकुखुरा पहिलो कि अण्डा ? यस्तो छ क्वान्टम फिजिक्सको जवाफ
विराटनगर, १ माघ । पहिला अण्डा आयो कि कुखुरा भनें विषयमा प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न प्रकारको बहस सुरु हुँदै आएपनि कसैको एकमत भने थिएन । कुखुरा पहिला आएको वा अण्डा पहिला आएको सवालले वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको अहिलेसम्म पनि दिमाग घुमाइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि कप्युटरको बिट्स र टेलिफोनको लाइनलाई लिइएको थियो । अमेरिकन फिजिकल सोसाइटीमा रहेको सोसाइटी अफ अमेरिकन फिजिक्स म्यागजिन फिजिकल रिभ्यु जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानले अण्डा वा कुखुरा निश्चित रूपमा दुवै पहिला हुनसक्ने बुझाउन प्रयास गरेको छ ।